आदर्श पाठ सन्देश आवृत्ति के हो? | Martech Zone
आदर्श पाठ सन्देश आवृत्ति के हो?
आइतबार, जुन 17, 2018 आइतबार, जुन 17, 2018 Douglas Karr
त्यहाँ कुनै मार्केटिंग च्यानल अधिक सीधा र उत्तम रिडेम्सन र प्रतिक्रिया प्रभावको साथ टेक्स्ट सन्देश (एसएमएस) भन्दा बढि हुन सक्छ। एउटा कम्पनी जसले यसका एसएमएस ग्राहकहरूलाई बेवास्ता गर्दछ उनीहरूको टेक्स्ट क्लब डण्डिन्डल र यसका साथै राजस्व देख्नेछन्। स्पेक्ट्रमको अन्त्यमा, सन्देशहरू सहित बमबारी गर्ने ग्राहकहरू उनीहरूलाई रिसाउने सम्भावना छ र अधिक सदस्यतामा बहुसंख्यक रूपमा परिणाम हुनेछ।
इन्फोग्राफिक विवरण एसएमएस मार्केटिंग उत्तम अभ्यास र ग्राहकहरूको व्यवहारमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ, सहित:
कसरी एक SMS ग्राहक को जीवनकाल मूल्य को सही मापन गर्न को लागी।
कसरी तपाइँको ग्राहक सूचिमा SMS मार्फत मार्केटमा सहमति प्राप्त गर्ने तरिका।
कसरी पाठ ग्राहकहरु चाहान्छन् र कति पटक चाहिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्ने।
कुञ्जी मेट्रिक्स कसरी स्थापना गर्ने र तपाईंको नतीजाहरू सटीक मापन कसरी गर्ने।
प्रत्येक अनुमति-आधारित मार्केटरले उनीहरूको मेसेजि frequency फ्रिक्वेन्सी, समग्र भोल्युम, र प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ कि उनीहरूले संभावनाको मूल्य प्रदान गर्दै छन्। यदि तपाईं प्रभावी एसएमएस मार्केटि campaigns अभियानहरू निर्माण गर्न केहि अंतर्दृष्टि चाहनुहुन्छ भने, हामीसँग अर्को लेख छ पाठ सन्देश मार्केटिंगको key प्रमुख तत्वहरू.
एसएमएस मेसेजि Withको साथ, यो कुनै पनि अन्य माध्यमहरू भन्दा यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ कि एक ग्राहकले उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पहुँच गर्न अनुमति दिइरहेको छ। आयरल्याण्डमा थोक पाठ विपणन कम्पनी नियन एसएमएस, यो इन्फोग्राफिक विकसित - एसएमएस मार्केटिंगमा कसरी ब्यालेन्स प्राप्त गर्ने तपाइँको पाठ सन्देश रणनीति अनुकूलित गर्न केहि सुझावहरू, तथ्या tips्कहरू, र रणनीतिहरू प्रदान गर्न।
२०१:: कसरी कम्पनीहरू र उपभोक्ताहरूले सोशल मीडिया प्रयोग गरिरहेका छन्
वेब 3.0. Pers पर्सिस्टको साथ समस्या